09/05/13 ~ Myanmar News Updates
Yun Wadi ကို view မယ်
10:11:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
နေ့စဉ်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွဲများ အပိုင်း (၂)
အင်္ဂလိပ်စကား ပြောဆိုရာတွင် အသုံးများသော၊ အသုံးဝင်သော စကားလုံးတွဲများ(Phrases) နှင့် စကားပြော ပုံစံ (Pattern) များကို ဆက်လက် မျှဝေလိုက်ပါသည်။
I used to + (verb) - လုပ်လေ့လုပ်ထ ရှိခဲ့သည်၊ (အတိတ်ကာလအတွက် သာသုံးရပါသည်။)
“used to” ကို verb ဖြင့်တွဲသုံးလျှင် အတိတ်တစ်ချိန်တွင် လုပ်လေ့လုပ်ထ ရှိသော၊ လုပ်ခဲ့ဘူးသော အခြေအနေများကို တင်ပြရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အတိတ်ကာလကိုသာ ရည်ညွှန်းသုံးသော အသုံးအနှုန်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိကာလတွင် ပြုလုပ်ခြင်း မရှိတော့ပါ။
- I used to smoke.
ဆေးလိပ် သောက်လေ့ရှိခဲ့တယ်။ (ယခု မသောက်တော့ပါ။)
- I used to live in California.
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ နေဖူးခဲ့တယ်။ (ယခု မနေတော့ပါ။)
- I used to go to the beach every day last year.
မနှစ်က နေ့တိုင်း ကမ်းခြေကို သွားလေ့ရှိတယ်။ (ယခုအချိန်တွင် မသွားတော့ပါ။)
- I used to like vegetables.
အသီးအရွက်တွေ ကြိုက်ခဲ့ဘူးတယ်။ (ယခု မကြိုက်တော့ပါ။)
I + (be) + used to + (noun) - ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည်။
- I am used to your face, but I forget your name.
မင်းမျက်နှာကို ရင်းနှီးတယ်၊ ဒါပေမယ့် နာမည်တော့ မေ့နေတယ်။
- My friend is used to Mathematic.
- She is not used to English.
သူ(မ)က အင်္ဂလိပ်စာ မကျွမ်းဘူး။
- They are used to music.
သူတို့က ဂီတနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြတယ်။
- I am not used to Mandalay weather.
မန္တလေးရာသီဥတုကို ကျွန်တော် မရင်းနှီးဘူး။
I have to + (verb) - ____ ရမည်။
သေချာသော ကိစ္စတစ်ခု လုပ်ရမည်၊ သွားရမည် စသည်ဖြင့် မကြာမီ လုပ်ဆောင်၊ ဖြစ်ပျက်တော့မည့် သေချာသော အခြေအနေများ တွင် “have+to” ကို အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။
- I have to go my work.
အလုပ်ကို သွားရမယ်။ (ကျိန်းသေ သွားရမည်။)
- I have to unpack my bags.
- They have to pay for the school fees.
သူတို့ ကျောင်းလခတွေ ပေးရမယ်။
တစ်ခုခု ကို လုပ်ရန် မလိုအပ်သော အခြေအနေမျိုးတွင် 'don't' နှင့် တွဲကာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ to suggest
- I don't have to do my homework.
- I don't have to go to my work today.
ဒီနေ့ အလုပ်ကို သွားဖို့ မလိုတော့ဘူး။
- I don't have to unpack my bags.
အိတ်ကို ရှင်းဖို့ မလိုတော့ဘူး။
'wanna' သည် သဒ္ဒါနည်းအရ အမှန်မဟုတ်သော်လည်း စကားပြောရာတွင် အသုံးများပြီး 'want to' နှင့် အဓိပ္ပာယ်တူပါသည်။ တစ်စုံတစ်ခုကို လုပ်ချင်သည်ဟု ပြောဆိုရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- I wanna talk with you.
မင်းနဲ့ ငါ စကားပြောချင်တယ်။
- I wanna search forajob.
- I wanna order some food.
စားစရာ နည်းနည်းလောက် မှာချင်တယ်။
- I wanna marry her.
- I wanna listen to that song.
တစ်စုံ တစ်ခုကို မလုပ်ချင်သည်ကို ဖော်ပြလျှင် အငြင်းဝါကျ ပုံစံနှင့် တွဲကာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- I don't wanna listen to that song.
ပုံမှာ မြင်တွေ့နေရတာက မင်းသမီးတော့ မှန်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်
အနုပညာ တစ်ခုတည်း လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူမဟာ သိပ္ပံပညာရှင် လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိသျှတို့၏ ကလေးဘဝ အကြိုက်ဆုံး ရုပ်ရှင်အဖြစ် E.T ဇာတ်ကားကို သတ်မှတ်
8:40:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
၁၉၈၂ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ E.T ဇာတ်ကား ကို ကလေးဘဝ အကြိုက်ဆုံး ရုပ်ရှင်အဖြစ် ဗြိတိန် နိုင်ငံသားတို့က မဲပေး ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်လို့ Reuters သတင်း ဌာနမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အခုလို ကလေးဘဝ အကြိုက်ဆုံး ရုပ်ရှင် စစ်တမ်း ကောက်ယူမှုကို ကမ္ဘာကျော် ကိုရီးယား ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆမ်ဆောင်း အီလက်ထရွန်နစ် ကုမ္ပဏီရဲ့ ဗြိတိန် ရုံးခွဲက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ကျပန်း ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဗြိတိန် နိုင်ငံသား ၁၅၀၀ ဦးကို ဆန္ဒ မဲပေးစေပြီး ရွေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
E.T ရုပ်ရှင်ဟာ Bambi၊ The Lion King၊ Toy Story နဲ့ The Goonies ဇာတ်ကားတို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဗြိတိန် နိုင်ငံသားတို့ရဲ့ ကလေးဘဝ အကြိုက်ဆုံး ရုပ်ရှင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆမ်ဆောင်း ကုမ္ပဏီရဲ့ ဗြိတိန်ရုံးခွဲက ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက် တစ်စောင်အရ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဗြိတိန် နိုင်ငံသားတို့ဟာ E.T ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ စတီဗင်စပီးလ်ဘာ့ဂ် ကိုလည်း အကြိုက်ဆုံး ဒါရိုက်တာအဖြစ် မဲပေး ရွေးချယ် ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့ပြီး မော်ဂန် ဖရီးမန်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ကား The Shawshank Redemption ဟာလည်း ဗြိတိန် နိုင်ငံသားတို့ ထပ်ကာထပ်ကာ အကြည့်ချင်ဆုံး ရုပ်ရှင် အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ယခု စစ်တမ်း ကောက်ယူခဲ့တဲ့ သူတွေရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းက သူတို့ ရုပ်ရှင် ကြည့်ရတဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က စိတ် အပန်းပြေဖို့နဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက် ရရှိဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ ဖြေကြားခဲ့ကြောင်း စစ်တမ်း ကောက်ယူ အပြီးမှာ ထုတ်ပြန်တဲ့ ဆမ်ဆောင်း ကုမ္ပဏီရဲ့ ကြေညာချက် တစ်စောင်အရ သိရပါတယ်။
ဘီကီနီဝတ်စုံနဲ့ရိုက်ဖို့ သုံးလကျော် လေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ဘောလိဝုဒ်မင်းသမီး
8:35:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ဘောလိဝုဒ်မင်းသမီးချော အာဒီတီရာအိုဟီဒါရီဟာ လာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာထွက်ရှိမယ့် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား "Boss" မှာ ပါဝင်မယ့် ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းဖြစ်တဲ့ ဘီကီနီဝတ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ရမယ့် အခန်း တစ်ခန်းအတွက် သုံးလကျော်လောက်လေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်လို့ ဖွင့်ဟလိုက်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ ဟီဒါရီရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုဟာ အားလုံးကိုငေးမောမှင် တက်သွားစေလောက်အောင် ကောင်းမွန်ခဲ့တယ်လို့ ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ဒါရိုက်တာအန်သိုနီဒီဆူဇာက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မင်းသမီးရဲ့ အတွင်းသိတစ်ဦးကတော့ ဒီဇာတ်ဝင်ခန်းကို တိကျစွာ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် သုံးလ ကျော်လောက် အချိန်ပေးလေ့ကျင့်ခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဘီကီနီဝတ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာသိရလို့ ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရသလဲလို့ မင်းသမီးကိုမေးမြန်းကြတဲ့ အခါမှာတော့ “ရေချိုးကန်ထဲမှာ ဆိုရင်တော့ ကျွန်မအမြဲတမ်း ဘီကီနီဝတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကို ကျွန်မ ပထမဆုံးဝတ်ရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး”လို့ မင်းသမီးက ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
နာမည်ကျော်မင်းသား အာရှေးကူးမားက ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး အခြား နာမည်ကျော် မင်းသားတွေအများကြီး ပါဝင်ထားတဲ့ "Boss" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ အိန်္ဒိယအက်ရှင်ဟာသရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး မင်းသမီးဟီဒါရီအတွက်တော့ ခုနစ်ကားမြောက်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်။
7:59:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
် လက်လှုပ်ရှားခြင်း ကြောင့် ဦးနှောက်ဆံခြည်မျှင်သွေးကြေ
ာဖွဲ့စည်းမှု ကောင်းမွန်ပြီးသွေးအထောက်အပံ့၊ အာဟာရနှင့် အောက်ဆီဂျင်ပေါများစွာ ရရှိနိုင်သောကြောင့် ဦးနှောက် နဗ်ဆဲလ်များနုပျိုစေသည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်သီးနှံများတွင်ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း (antioxidant)များပါဝင်သောကြောင့် ဖရီး ရယ်ဒီကယ် (free radical) ဟုခေါ်သည့် အိုမင်းရင့်ရော် စေသောဓါတ်များကိုချေဖျက်ပေးနိုင်သည်။
ဦးနှောက်လုပ်ငန်းများသည်အသက်သုံးဆယ်ဝန်း ကျင်မှစ၍ဖြည်းဖြည်းချင်းဆုတ်ယုတ်လာသည်။ သို့သော် ဦးနှောက်ကိုအမြဲတစေ အလုပ်ခိုင်းစေနေသူများ၌ ဦး နှောက်အိုမင်းမှုကို ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။ စကားလုံး ဆက်ကစားခြင်း၊ပဟေဠိဖြေခြင်း၊ ဘာသာစကားအသစ် တစ်ခုသင်ယူခြင်း၊ တူရိယာပစ္စည်းတီးမှုတ်ရန်သင်ယူခြင်း တို့ဖြင့်ဦးနှောက်ကို အမြဲတစေသစ်လွင်နေစေရန် ထိန်း သိမ်းနိုင်သည်။
စိတ်ဖိစီးမှုသည်ဦးနှောက်တည် ငြိမ်မှုနှင့်မှတ်Óဏ်မှတ်သားနိုင်စွမ်းကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။နာတာ ရှည် စိတ်ဖိစီးမှုခံရသောအခါ ဦးနှောက်၏့ငစစသခောစကျ ဟုခေါ် သောအစိတ်အပိုင်းသည် မှတ်Óဏ်မှတ်သားနိုင်စွမ်းလျော့နည်းလာသည်။
ဟာသဓါတ်ခံရှိခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်မှဒိုပါမင်း (dopamine) ဟော်မုန်းများထွက်ရှိလာပြီးစိတ် ကြည် လင်ချမ်းမြေ့မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ဒိုပါမင်းဟော်မုန်းသည် ဦးနှောက်ဆဲလ်များအတွက် အားဆေးတစ်ခုလည်းဖြစ် သည်။
5:39:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမနေ့ အခမ်းအနား MCC တွင် ကျင်းပမည်
5:25:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
၇၃ နှစ်ပြည့် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမနေ့ အခမ်းအနားကို ရခိုင်ပြည်တွင် ကျင်းပစဉ်က မြင်ကွင်းတခု (ဓာတ်ပုံ – နရဉ္စရာ သတင်းဌာန)
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမနေ့ အခမ်းအနားကို ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ရေးရာဝန်ကြီးဋ္ဌာနက ဦးဆောင်ကာ ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာ စီးပွားရေး ကွန်ဗင်းရှင်း စင်တာ (MCC) တွင် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ရေးရာဝန်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဗြိတိသျှဘုရင်ခံ ဆာရယ်ဂျီနယ် ကရက်ဒေါက်ကို မြန်မာပြည်မှ ထွက်သွားရန် နှင်ထုတ်ခဲ့သည့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ပျံလွန်တော်မူသည့် အထိမ်းအမှတ် နေ့ကို နှစ်စဉ် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အစိုးရက လုံခြုံရေးချ စောင့်ကြည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခံခဲ့ရသည့် အခမ်းအနား တခုဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများထံမှ သိရသည်။
“ဦးဥတ္တမ ဆိုတာက ရခိုင်အမျိုးသား တခုတည်းအတွက် မဟုတ်ဘူး။ ပြည်ထောင်စု တခုလုံးအတွက် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်း ခဲ့တာပါ။ နိုင်ငံရေး မျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ရဲ့ အထိမ်းအမှတ်နေ့ကို ဘာကြောင့် ပိတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ နားမလည်ဘူး။ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ လုပ်သင့်တာ ကြာပါပြီ” ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မြတ်ကျော်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ထို့အပြင် ယခုကဲ့သို့ ပွင့်လင်းစွာ ကျင်းပခွင့်ပေးခြင်းသည် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးမှုနှင့် တဦးအပေါ် တဦး ယုံကြည်မှု ခြေတလှမ်း တိုးခြင်းဟု ယူဆကြောင်း သူက ဆိုသည်။
ရခိုင် တိုင်းရင်းသားရေးရာ ၀န်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်ကလည်း “အခုလို လုပ်ခွင့်ရတာဟာ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို သွားနေတယ်ဆိုတဲ့ ပြယုဂ်တခုလို့ မြင်ပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
MCC တွင်ပြုလုပ်မည့် ယင်းအခမ်းအနားကို ဆရာတော် ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင် နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အထိမ်းအမှတ် ပြပွဲများနှင့် ရခိုင်သမိုင်းပညာရှင်များ၏ ဟောပြောပွဲများလည်း ပါဝင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
“တိုင်းရင်းသား အားလုံးကို ဖိတ်စာရသည်ဖြစ်စေ၊ မရသည်ဖြစ်စေ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်” ဟု ဦးဇော်အေးမောင်က ပြောသည်။
၇၄ နှစ်မြောက် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမနေ့ အခမ်းအနား အကြိုဟောပြောပွဲကို ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့တွင် စက်တင်ဘာ ၂ ရက် နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၃၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည့် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် အင်္ဂလိပ် အစိုးရက မြန်မာပြည်ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ် မြန်မာအမျိုးသားများ နိုင်ငံရေး စိတ်ဓာတ် မြင့်မားလာစေရန် ဟောပြောမှု၊ နှိုးဆော်မှုများကြောင့် ထောင်ဒဏ် အကြိမ်ကြိမ် အပေးခံခဲ့ရသည့် သံဃာတော် တပါးဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ထိုစဉ်က သြဇာရှိခဲ့သည့် သူရိယ သတင်းစာမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ကျွန်ပြု အုပ်ချုပ်နေသည့် ဗြိတိသျှဘုရင်ခံအား မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်သွားရန် နှင်ထုတ်ခဲ့ရာ သူ့အား လွတ်လပ်ရေး မီးရှူးတန်ဆောင်ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။
5:22:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
လယ်သမား တစ်ဦးဖြစ်သူ မူဆာလီက သူ၏ မင်္ဂလာ ပွဲအား ၎င်း၏ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် မြေးနှစ်ဦး၏ မင်္ဂလာ ပွဲနှင့်အတူ လေးနာရီကြာ ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မူဆာလီနှင့် မြေးနှစ်ဦး၏ လက်ထပ် မင်္ဂလာ ပွဲအား ဇွန် ၄ ရက်က ဘဂ္ဂဒက်မြို့ မြောက်ပိုင်း၌ ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အေအက်ဖ်ပီ သတင်း ဌာန၏ ဖော်ပြချက် အရ သိရသည်။
မြေးနှစ်ဦးနှင့် အတူ လက်ထပ် မင်္ဂလာပွဲ ဆင်နွှဲရသည့် အတွက် အလွန် ပျော်ရွှင်မိကြောင်း၊ မိမိကိုယ် မိမိအသက် ၂၀ အရွယ်ကဲ့သို့ ပြန်လည်နုပျို သွားသည်ဟု ခံစားရကြောင်း ဆာမာရာမြို့ တောင်ပိုင်း ဂက်ဘန်းရွာတွင် နေထိုင်သည့် မူဆာလီက ဆိုသည်။
မူဆာလီသည် ပထမ အိမ်ထောင်နှင့် သားသမီး ၁၆ ဦး ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
5:03:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
4:47:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
သုံးဦးသား လက်နှိပ်ဓါတ်မီးကိုစီနဲ အမှောင်ရိပ်မှာခုံပုလေးတွေချလို့ စက်ဘီးကိုသရဲဆွဲမယ့်အချိန်ကိုစောင့်ကြည်နေကြပါတယ် အရက်ဆိုင်ရှင်ရဲ့
အရက်ဆိုင်ရှင်ဦးလေးကြီးကိုနှုတ်ဆက်ကာပြန်ခဲ့ပါတယ်။။အဲဒီည က သရဲမမိခဲ့ပါ။။တောက်နာတယ်ကွာ။။
ကိုတိုင်သရဲဖမ်းခဲတာပါ။ ဒါပေမယ်မတွေခဲ့ရပါဘူး ….သာရဝေါ ရွာကြီးရဲ့ မလှမ်းမကမ်းကရွာ လေးတစ်ခုမှာ တစ်ကယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ပါ။
ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံး မော်ဒယ်လ် ဂီဆယ်လီ ဘန့်ချန်း
1:41:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
မော်ဒယ်လ် ဂီဆယ်လီ ဘန့်ချန်းသည် အနုပညာ သက်တမ်း ခုနစ်နှစ် အတွင်း ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံး မော်ဒယ်လ်အဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည်လျက် ရှိကြောင်း Forbes မဂ္ဂဇင်းမှ ထုတ်ပြန်ချက် တစ်ရပ်အရ သိရသည်။
သူမ၏ အနုပညာ ၀င်ငွေမှာ ယခင် နှစ်ကထက် နည်းသော်လည်း ဂီဆယ် လီဘန့်ချန်းသည် ကမ္ဘာကျော် မော်ဒယ်လ်များ ဖြစ်သည့် မီရန်ဒါကားနှင့် အေဒရီရာနာ လိုင်မာတို့ကို ဖြတ်ကျော်၍ ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံး မော်ဒယ်လ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ် ကလေး နှစ်ဦး၏ မိခင် ဘရာဇီး မော်ဒယ်လ် ဂီဆယ် လီဘန့်ချန်းသည် အမေရိကန် ဘောလုံး အကျော်အမော် တွမ်ဘရာဒီ၏ ဇနီးချော ဖြစ်သည်။ သူမသည် ကမ္ဘာကျော် အလှပြင် ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည့် Sejaa ကုမ္ပဏီ၊ Pantene ကုမ္ပဏီ၊ Oral-B ကုမ္ပဏီ၊ ဘရာဇီး နိုင်ငံမှ နာမည်ကြီး Grendene အတွင်းခံ အ၀တ်အထည် ကုမ္ပဏီ တို့၏ ပင်တိုင် မော်ဒယ်လ်အဖြစ် စာချုပ်ချုပ်ဆို ထားသည်။
ဂီဆယ် လီဘန့်ချန်း၏ ယခုနှစ် ၀င်ငွေမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၂ သန်း ရှိကြောင်း Forbes မဂ္ဂဇင်းက ခန့်မှန်းထားသည်။
သချာင်္ဂဏန်းလေးတွေရဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်
1:34:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
သချာင်္ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေအတွက် အပျင်းပြေ စာလုံးလေးစီကြည့်ရအောင်
ပထမမြှောက်ပြီး ပေါင်းလို့ရတဲ့ အဖြေတွေက9ကနေပြီး 1အထိအစီအစဉ်လိုက်သွားကြတာပေါ့။
123456789 x 8 +9= 987654321 ကဲရသွားပြီဗျာ...။
နောက်တစ်ခုက 1 တွေပဲ အစဉ်လိုက်သွားပါ့မယ်။
1 ဆယ်လုံးရအောင် မြှောက်ပြီးပေါင်းကြစို့။
စီနီယာ 1 ကစေနပြီးပဲ မြှောက်ပါ။
123456789 x9+10= 1111111111 ဟော ရသွား ပြီဗျာ 10 လုံး။
ကဲနောက်တစ်ခုနော်.. ဒါကတော့ 8 တွေအစဉ်လိုက်ရအောင်လုပ်တာပါ။
98765432 x9+0= 888888888 8ဆယ်လုံးရသွားပါပြီ။
မလွယ်ဘူးလားဗျာ သချာင်္ဂဏန်းလေးတွေမှာ သူ့အစဉ်အတိုင်းလုပ်ကြည့်ရင်
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ စီနီယာ ၊ ဂျူနီယာနံပတ်လေးတွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာ...။***
Credit to Sharing For All
ပြည်ပန်းညို ( Cassia glauca Lam )
1:31:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
အပင်-- အပင်ငယ် မျိုး ဖြစ်သည်။ အမြင့် ၁၀ ပေ ကျော် ထိ ရှိ၏။ အကိုင်း အခက် များ၍ တောက်ပြောင် သော အရောင် ရှိသည်။
အရွက်-- ရွက်ပေါင်း ဖြစ်ပြီး ရွက်လွှဲ ထွက်သည်။ ၅ လက်မ ၉ လက်မ ထိ ရှည်သည်။ရွက်မြွှာ များ ရွက်ဆိုင် ထွက်ပြီး ထိပ်ဝိုင်းသည်။ ရွက်ပြား ချော၍ ရွက်နား ညီသည်။ သေးငယ် သော ရွက်စွယ် ပါရှိသည်။
အပွင့်-- ကြီးသည်။ တောက်ပသော အ၀ါရောင် ရှိသည်။ ၀ါဆို၊ ၀ါခေါင်လ တွင် ပွင့်သည်။
အသီး-- သီးတောင့် ရှည်မျိုး ဖြစ်၍ ၆ လက်မ ၈ လက်မ ထိ ရှည်သည်။ ပြား၍ ပါးလှပ်ပြီး ပြောင်ချော သည်။ အစေ့ ၂၀ မှ ၃၀ ထိ ပါရှိသည်။ အသီးညှာ ထင်ရှား သည်။ တော်သလင်း မှ တန်ဆောင်မုန်း လ အတွင်း သီးသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်တွေ့နိုင်သောနေရာများ : ပေါက်ရောက်သည့်ဒေသ-- မြန်မာ နိုင်ငံ အနှံ့ အပြား တွင် ပေါက်ရောက် သည်။
ပေါက်ရောက်ပုံ--သဘာဝ အလျောက် ပေါက် ရောက်သည်။
အသုံးဝင်ပုံ : အာနိသင်-- မြန်မာ ဆေးကျမ်း များ အလို အရ ပြည်ပန်းညို သည် အေး၏။ အရသာ ဖန်ခါး၏။ ဆီးကို များစေ၍ ညောင်းကျ ရောဂါကို ပျောက်ကင်း စေနိုင်သည်။
၁။ အရွက် ကြိတ်ညှစ်ရည် ကို နို့ရည် သကြားတို့နှင့် သောက်လျှင် ဆီးအောင့် ရောဂါ နှင့် ညောင်းကျ ရောဂါ ပျောက်စေ၏။
၂။ ပြုတ်၍ ပုစွန်ခြောက် ဖြင့် သုပ်စားက လေထိုး လေအောင့် ရောဂါ၊ လေလုံး ရောဂါ၊ အဖျား ရောဂါ ၊ဆီးချို ရောဂါ၊ ညောင်းကျ ရောဂါ ပျောက်၏။
၃။အမှုန့် ပြု၍ စားပါက လေရောဂါ၊ အပူရောဂါ၊ ဆီးအောင့် ရောဂါ များ ပျောက်၏။
၄။အရွက် ကို ဟင်းချို ချက်သောက် က ပိတ်ဝမ်း ရောဂါ၊ သွေးဝမ်း ရောဂါ၊ လေရောဂါ၊အစာ မကြေ ၊ သည်းခြေ ပျက် ရောဂါ များ ပျောက်၍ အားကို ဖြစ်စေ၏။
1:24:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ဘဏ်ကို ဓားပြတိုက်၊ ငွေတဒေါ်လာပဲတောင်းပြီး အဖမ်းခံဖို့ ရဲကိုစောင့်နေတဲ့အဖြစ်အပျက် တခု သောကြာနေ့က အမေရိကမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၅၀အရွယ်အဲလ်စစ်ဆို သူဟာ အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်က အမေရိကဘဏ်တခုကိုဝင်ပြီး
ကဲ၊ဒါ ဘဏ်ကိုဓားပြတိုက်တာပဲ။ ငါ့ကိုတဒေါ်လာပေးစမ်းဆိုပြီးပြောပါတယ်။
ငွေတဒေါ်လာရပြီးတဲ့နောက်တော့ ဧည့်သည်ထိုင်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးသူ့ကိုလာဖမ်းမယ့်ရဲ ကိုစောင့်နေ လိုက်ပါတယ်။
အဲလ်စစ် ဟာ အိမ်ယာမဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မူးယစ်ဆေးစွဲနေသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူအဖမ်းခံချင်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ သူ့ ရဲ့ သွားရောဂါနဲ့ ဆေးစွဲနေတဲ့ပြဿနာ ကိုကုသမှုခံယူချင် လို့ဒီလိုအဖမ်းခံချင်ရတာလို့ သူကရဲ အရာရှိကိုပြောပါတယ်။
ဂျင်ဆင်း (Ginseng)မြစ်၏ လူ့ကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြုစေမှုမှာ အံ့မခန်းပင်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း၅၀၀၀ခန့်မှ ယနေ့အချိန်ထိဆေးဝါးအဖြစ် သုံးစွဲနေသော အပင်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်သည်။ ယင်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသောပစ္စည်း “Adaptogen” ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာကိုစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် အခြားရောဂါများမှ ကာကွယ်ရန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော ကြောင့် ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျင်ဆင်းမြစ်ကိုရေနွေးထဲသို့ လက်ဖက်ခြောက်ကဲ့သို့ခတ်ခြင်းသို့ မဟုတ်ပြုတ်ပြီး သုံးဆောင်လေ့ရှိသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဆေးပြား၊ဆေးတောင့်၊အရည်ပုံစံများနှင့်လည်း ရရှိနိုင်နေပြီဖြစ်သည်။
၁။ ဂျင်ဆင်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာစေပါသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုပမာဏကိုလျော့ပါးသွားအောင်လှုံ့ဆော် ပစ္စည်း (stimulant) အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာဖြစ်ပျက်မှုများနှင့် စွမ်းအင်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
၂။ အရွယ်မတိုင်မီအိုမင်းရင့် ရော်ခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင် သည်။ယင်းတွင်ပါဝင်သောဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင်ပစ္စည်း (anti-oxidants) များက အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်စေနိုင်ရုံသာမက အခြားနုပျိုစေသော ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် maltol ကိုထွက်ရှိစေသည်။
၃။ တက်ကြွရွှင်လန်းစေသည်။ ဂျင်ဆင်းလက်ဖက်ရည်ကို သောက်သုံးခြင်း ကဦးနှောက်ဆဲလ်များကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပြီးအာရုံစူးစိုက်မှု၊ အတွေးအခေါ်များနှင့် မှတ်ဥာဏ်ကိုပိုမိုတိုး တက်စေသည်ဟုသိရသည်။
၄။ အမျိုးသားစွမ်းရည်ကိုမြင့်တက်စေသည်။ အမျိုးသားများတွင် ပန်းသေ၊ပန်းညှိုးဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ် နိုင်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးသုခကို ပိုမိုခံစားရစေနိုင်သော အာနိသင်ရှိပြီးလိုအပ်သော ကျားဟော်မုန်းများကို သင့်တော်သော ပမာဏအတိုင်းရှိစေသည်။
၅။ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သည်။ဂျင်ဆင်းသည် သဘာဝမှရရှိသောအစာစားချင်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ပေးသည့်အပင်ထွက် ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး အ၀လွန်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
၆။ သွေးအချိုဓာတ်ကိုထိန်းပေးနိုင်သည်။ လေ့လာမှုများအရ ဂျင်ဆင်းသည် ဆီးချို၊သွေးချိုရောဂါရှင်များ၏ သွေးအချိုဓာတ်ပမာဏကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုပြီး သွေးတွင်းသကြားဓာတ်လျော့ပါးစေသော အာနိသင်လည်းရှိနေသည်။
၇။ ဓမ္မတာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်သောသုတေသနအရ အမျိုးသမီးများတွင်ဂျင်ဆင်းက ဓမ္မတာလာခါနီးနာကျင်မှုကိုလျော့ပါးစေနိုင်သည်ဟု သိရသည်။
သတိပေးချက်။ ။အခြားသောဆေးဝါးနှင့် တိုင်းရင်းဆေးအာနိသင်များကဲ့သို့ပင် ဂျင်ဆင်းသည်လည်း ဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအသုံးပြုသင့်သော အပင်ထွက်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များနှင့် နို့တိုက်မိခင်များတွင် အခြားဆေးဝါးများနှင့် တွဲဖက်မသောက်သုံးသင့်ကြောင်းကိုကျန်းမာရေးပညာရှင်များက တိုက်တွန်းထားသည်။
12:19:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
တခါတုန်းက ကောသမ္ဗီပြည်ရဲ့ ရွာငယ်တခုမှာ ထင်ရှားတဲ့ လက္ခဏာဆရာ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦး ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ဇနီးမောင်နှံမှာ အင်မတန်ချောမောလှပတဲ့ သမီးကညာ တဦးလည်း ရှိပါသတဲ့။ မာဂဏ္ဍီဟာ တောမှာမွေးတဲ့ တောသူမလေးဆိုပေမယ့် ရုပ်ရည်လက္ခဏာဟာ ကတော်ဆယ်ပါး တပါးအပါအ၀င်ဆိုတဲ့ ရုပ်မျိုးဖြစ်သလို ဗေဒင်လက္ခဏာ ကိန်းခန်းတွေအရ ကြည့်ရင်လည်း မလွဲမသွေ ကတော်ဖြစ်မယ့် ဇာတာရှင်ပါတဲ့။ ဒီတော့လည်း မိဘတွေက သူတို့ကညာ အရွယ်ရောက်ပြီဆိုကတည်းက ရုပ်ရည်လက္ခဏာနှင့် တထပ်တည်းဖြစ်နိုင်ဖို့ သူ့သမီးရဲ့ ကြင်ဖက်ကို ဂရုတစိုက် ရွေးချယ်ကြပြီပေါ့။
သူတို့သမီးကိုလည်း အမြဲလို ဒီလို ဆုံးမစကား ပြောတတ်သေးသတဲ့။
(ဖခင်) သမီး-သမီးရဲ့ ရုပ်ရည်လက္ခဏာဟာ အင်မတန်ထူးခြားတယ်နော်၊ တော်ရုံ တန်ရုံများ စိတ်ထဲတောင် မထည့်နဲ့ သမီးရေ၊ မှန်းကတည်းက အမြင့်ဆုံးကို မှန်း၊ ရင်လောက်မှန်းမှ ဒူးလောက်ကျ ဆိုတဲ့စကားလည်း ရှိသေးတာကလား-
(သမီး) စိတ်ချပါ အဖေရယ်၊ ဒီရွာက လူတွေများတော့ သမီးဖြင့် စိတ်ကူးထဲကို မထည့်ဘူး၊
မိဘနဲ့သမီး ညှိပြီးသားဆိုပေမယ့် အမေလုပ်တဲ့သူက တမျိုးပူပြန်သတဲ့၊ သူတို့သမီးက ဘုရင်ကတော်ဖြစ်ဖို့ ဇာတာကောင်းပေမယ့် ကောသမ္ဗီဘုရင် ဥတေနရဲ့ စရိုက်ကိုလည်း သူတို့လင်မယားက မကြိုက်ချင်ပြန်ဘူးဆိုပဲ၊ သူတို့လင်မယားရဲ့ လက္ခဏာဟောပြောမှု ထင်ရှားချက်က ရွှေနန်းတော်ထိ ပေါက်သတဲ့၊ ဒီတော့ မင်းစိုးရာဇာတွေနဲ့ အဆက်အဆံတွေကလည်းရှိတော့ တဆင့်စကား တဆင့်နားနဲ့ ဥတေနဘုရင်ဟာ ဒေါသကြီး စရိုက်ကြမ်းတယ်လို့ သိထားခဲ့တယ်။ အိမ်က သူတို့သမီးကလေးကလည်း အဖေအမေ အစွမ်းကုန် အလိုလိုက်ထားတဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဆိုတော့ တချိန်ချိန် ဘုရင်က အမျက်တော်ရှရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာထိ မိဘအနေနဲ့ တွေးပူကြတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဖူးစာမဆုံသေးတဲ့ ဘုရင်ကိုတောင် စိတ်ကူးနဲ့မှန်းပြီး သဘောမကျဖြစ်နေတဲ့ မိဘတွေက မာဂဏ္ဍီရဲ့ သတို့သားလောင်းကို ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ ရှာကြစမြဲပေါ့။
တနေ့မှာ ဘုရားရှင်ဟာ ဒီနေ့အတွက် ကျွတ်ထိုက်တဲ့သူတွေကို ဉာဏ်နှင့်ဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါ မာဂဏ္ဍီရဲ့ မိဘနှစ်ပါးကို မြင်သတဲ့။ ဒါကြောင့်လည်း ခရီးအနီးအဝေးကို ဂရုမပြုဘဲ တပါးတည်း ကြွချီတော်မူလာခဲ့တယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာပဲ မာဂဏ္ဍီရဲ့ မိဘနှစ်ပါးကလည်း အကြောင်းကိစ္စတခုနဲ့ ရွာပြင်ဘက်ကို ရောက်နေကြသတဲ့။ ဒီမှာတွင် မြေမှာထင်ကျန်နေတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ ခြေရာကို အဖေကြီးက စမြင်ခဲ့တယ်။
( ဖခင် ) အိုး-မကြုံစဖူး ထူးကဲလှချည်လား ရှင်မရေ၊ ဒီမှာ-ကြည့်စမ်းပါဦးဟဲ့၊ ဒီခြေရာဟာ သာမန်ယောက်ျား တယောက်ရဲ့ ခြေရာမဟုတ်ဘူး။ စကြ၀တေးမင်းတောင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ ခြေရာကွဲ့။
( မိခင် ) ဟင်-ဟုတ်လား၊ ကြည့်စမ်းပါရစေဦး၊ အင်း-ထူးခြားတာတော့ ဟုတ်တယ်ရှင့်၊ ဒါပေမယ့် ဒီခြေရာရှင်ဟာ လူ့လောကနဲ့ ကင်းလွတ်မယ့်သဘောရှိတယ်၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အာသဝေါကုန်ခန်းနေတဲ့ ခြေရာရှင်ပဲ။
ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်သား သူ့အထင်မှန်တယ်၊ ငါ့အထင်မှန်တယ်နဲ့ ငြင်းခုံဆက်လျှောက်လာကြရင်းမှ သစ်ပင်ရိပ်တခုရဲ့ အောက်မှာ ဘုရားရှင် သီးတင်းသုံးနေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဘုရားရှင်ကို ဖူးတွေ့ရပေမယ့် ဘုရားရှင်မှန်း မသိဘူးတဲ့။ အဲဒီအချိန်အခါက ဘုရားရှင်နဲ့အတူ တခြားသော သာသနာအတုအယောင်တွေလည်း အများကြီးဆိုတော့ သာမန်ရဟန်းတပါးအဖြစ်ပဲ ထင်နေသတဲ့။ ဒါကြောင့်လည်း
( ဖခင် ) အရှင်ရဟန်း-ကျွန်ုပ်ကို စကားပြောခွင့်ပေးပါ၊ အရှင်ရဟန်းရဲ့ ခြေရာကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင်ကတည်းက ထူးခြားမှန်း သိပါတယ်။ စကြ၀တေးမင်းတောင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ ခြေရာရှင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မှာ ရှင်ရဟန်းလိုပဲ ထူးခြားတဲ့ ကြန်အင်လက္ခဏာရှိတဲ့ သမီးကညာတယောက် ရှိပါတယ်။ ထူးခြားသောသူနှစ်ဦး ပေါင်းဖက်မယ်ဆိုရင် အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲ အရှင်ရဟန်း၊ ကျွန်ုပ်၏သမီးကို လက်ခံပေးပါလော။
ဒီအချန်မှာ အမိအဘနောက်ကို လိုက်လာတဲ့ မာဂဏ္ဍီဟာလည်း အနားကို ရောက်ရှိနေသတဲ့။ အဖေလုပ်သူက ဒီလို စကားလမ်းကြောင်းနေတာဆိုတော့ မာဂဏ္ဍီရဲ့ စိတ်ထဲမှာလည်း အနည်းနဲ့အများတော့ စိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့။ ဒီရဟန်း ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုပြီး ကျက်သရေအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ရဟန်းကို ခိုးကြည့်နေခဲ့တာပေါ့။ ဒီအခါမှာ-
( ဘုရားရှင် ) ဒါယကာကြီး-ငါဘုရားဟာ စည်းစိမ်ဥစ္စာအားလုံးကို စွန့်ပယ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေတယ်။ လှပပါတယ်ဆိုတဲ့ သင့်ရဲ့သမီးကို မဆိုထားနဲ့ ၀သ၀တ္တီနတ်ပြည်က နတ်သမီးတွေကိုတောင် ပိုင်ဆိုင်လိုစိတ် ကင်းခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ မိန်းမနှင့်တကွ ပိုင်ဆိုင်ချင်စရာကောင်းတဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာမှန်သမျှဟာ ဆင်းရဲမျိုးစုံဖြစ်စေဖို့ အကြောင်းအရာတွေ ချည်းပါပဲ ဒကာ။ ဓားသွားပေါ်က ပျားရည်စက်တွေလို မက်စရာမရှိပေဘူး၊ တကယ်တော့ ချောပေ့ လှပေ့ဆိုတဲ့ သင့်သမီးဟာလည်း လှယမင်းထင်နေတဲ့ အပုပ်အသိုးသာ ဖြစ်တယ်။ လက်ခံဖို့မဆိုထားပါနဲ့ ခြောက်ထောက်နဲ့တောင် မထိလိုပါ။
ဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတော်ကြားမှာ မိဘနှစ်ပါးဟာ တထိုင်တည်းနဲ့ တရားရသွားပေမယ့် မာဂဏ္ဍီကတော့ အမျက်ဒေါသမီးတွေ ဟုန်းဟုန်းထပြီပေါ့။ ငါ့ကို အပုပ်အသိုးလို့ တင်စားတဲ့ရဟန်း ဘာမို့လို့လဲ။ တနေ့ ငါ့အကြောင်းကို သိစေမယ်ဆိုပြီး စိတ်ထဲက ကြုံးဝါးခဲ့သတဲ့။ နောင်တချိန်မှာ ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ အုတ်ထိန်းမှုအောက်မှာ ဆင်လက်ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ မာဂဏ္ဍီဟာ ကောသမ္ဗီဘုရင် ဥတေနရဲ့ မိဖုရားတပါး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တနေ့မှာ ဘုရားရှင်ဟာ ပင့်ဖိတ်သူရှိတဲ့အတွက် ကောသမ္ဗီမြို့တော်ကြီးကို ကြွချီဖို့အကြောင်း ဖြစ်လာတယ်။ အခွင့်အရေးကို စောင့်နေတဲ့ မိဖုရား မာဂဏ္ဍီဟာလည်း လက်စားချေဖို့ စပြီပေါ့။ ဘုရားရှင်နဲ့ နောက်တော်ပါး သံဃာတော်တွေ ကြွလာတဲ့လမ်းမှာ ကောသမ္ဗီလူမိုက်တွေငှါးပြီး မကြားဝံ့ မနာသာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဆဲရေးခိုင်းခဲ့တယ်။
ဒီတော့ နောက်တော်ပါးက ပါလာတဲ့ အရှင်အာနန္ဒာက ဘုရားရှင်အစား မခံသာတော့ဘဲ ဒီအရပ်ကို ဆက်မကြွဖို့ လျှောက်သတဲ့။ ဒီအခါ ဘုရားရှင်က
(ဘုရားရှင်) အာနန္ဒာ-နောက်တနေရာရောက်လို့ ဒီလိုမျိုး ဆဲခံရဦးမယ်ဆိုရင်ရော
(အာနန္ဒာ) နောက်ထပ် ရွှေ့တာပေါ့ဘုရား
(ဘုရားရှင်) ဟုတ်ပြီ-ရွှေ့တဲ့နေရာမှာ ထပ်တွေ့ရင်ရော
(ဘုရားရှင်) အာနန္ဒာ-ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ စစ်မြေပြင်ကိုဝင်တဲ့ ဆင်ပြောင်ကြီးဟာ ကျလာတဲ့ လေးမြှားဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရသလို ပြဿနာတို့ကို သည်းခံပါ။ သည်းခံခြင်းလက်နက်ကို ဘယ်အရာမျှ မထိုးဖောက်နိုင်ပါဘူး။
အာနန္ဒာ-အခု ဆဲဆိုနေတဲ့ လူမိုက်တွေဟာ ခုနစ်ရက်ထက် ပိုပြီး မဆဲနိုင်ပါဘူး။ သည်းခံခြင်းတရားနဲ့ ဆင်ခြင်ပါ အာနန္ဒာ။
ဘုရားရှင်ရဲ့ စကားဟာ အင်မတန် မှန်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ လူမိုက်တွေ လက်လျှော့သွားရတဲ့အထိ ဘုရားရှင်ရဲ့ သည်းခံခြင်းတရားက အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
ကလေးတို့ရေ-ဒီဇာတ်တော်ကို ဖတ်ပြီးရင် ကဲ့ရဲ့ ခုနစ်ရက်၊ ချီးမွမ်းခုနစ်ရက် ဆိုတာ ဒီကနေများ ဖြစ်လာသလား စဉ်းစားစရာပါပဲ-နော်။
( မိုးမိုးစောဝင်း )
12:06:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
11:54:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
ဝသန်ရာသီ၏ မိုးရေစက်များနှင့်အတူ ဖြစ်ပွားတတ်သော ရောဂါများထဲတွင် ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ရောဂါသည် အဓိကပါဝင်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မိုးဥတုသည် စွတ်စိုသော သဘာဝရှိပြီး အချို့လူများမှာ မိုးရေထဲတွင် ကြာမြင့်စွာ သွားလာလှုပ်ရှားခြင်းကြောင့် အအေးပတ်ကာ ခြေအေးဝမ်းရောင် ဆိုသကဲ့သို့ ဝမ်းဖောဝမ်းရောင် ဝမ်းပျက်ခြင်း ဖြစ်စေပါသည်။ မိုးရာသီတွင် အစားအစာ မဆင်မခြင် စားသုံးခြင်းကြောင့်လည်း ဤရောဂါဖြစ်စေပါသည်။ ထိုရာသီ၌ အသီးအနှံများ များစွာသီးသဖြင့် ရာသီပေါ်သီးနှံဖြစ်သည့် သရက်သီး၊ သင်္ဘောသီး၊ ဒူးရင်းသီး၊ နာနတ်သီး၊ စသည်တို့သည် အများအပြား ဈေးကွက်ထဲသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။
ဈေးကွက်ထဲရှိ အသီးများထဲတွင် လတ်ဆတ်သည့် အသီးများ ပါသကဲ့သို့ အမှည့်လွန်အသီးများလည်း ပါရှိပါသည်။ ထိုအမှည့်လွန် အသီးများထဲတွင် ဝမ်းပျက်စေသည့် ရောဂါပိုးများ ဝင်ရောက်တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအသီးများကို စားသုံးခြင်းဖြင့် ထိုရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
၄င်းအပြင် မသန့်ရှင်းသော လက်လုပ်ချဉ်များ၊ လက်သုပ်စုံများနှင့် ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်လာသည့် ယင်ကောင်များနားသည့် အစားအစာများကို စားသုံးမိလျှင်လည်း ထိုရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ မသန့်ရှင်းသော ရေကို သောက်သုံးမိခြင်း၊ သန်ကောင်၊ တုပ်ကောင်များ ရှိခြင်းတို့ကြောင့်လည်း ဝမ်းလျှောရောဂါ ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။
ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ရောဂါသည် အသက်အရွယ်မရွေး၊ ကျားမမရွေး လူတိုင်းလိုလို ကြုံဖူးသည့် ရောဂါ
ဖြစ်သဖြင့် ဂရုပြုစရာ ရောဂါမဟုတ်ဟု အချို့က ထင်မြင်ယူဆကြပါသည်။ ကလေးများ ဝမ်းသွားလျှင်လည်း ထိုင်ခါစ အရွယ်ဖြစ်၍ ဝမ်းသွားတတ်သည်ဟူ၍၄င်း၊ မတ်တတ်စမ်းခါစ အရွယ်ဖြစ်၍ ဝမ်းလျှောခြင်းသည် သဘာဝဟု ယူဆကာ အမှတ်တမဲ့ထား၍ ဆေးကုသမှု မပြုသဖြင့် အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်သွားသည့် ကလေးငယ်များကိုလည်း တွေ့ခဲ့ဖူးပါသည်။
ဝမ်းလျှောခြင်းသည် သာမန်ရောဂါဟု ထင်ကြသော်လည်း ဂရုမပြုပါက နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါများ ဝင်ရောက်ကာ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သဖြင့် သတိထားရမည့် ရောဂါပင် ဖြစ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဝမ်းလျှောခြင်း လက္ခဏာမှာ တနေ့လျှင် သုံးကြိမ်ထက်ပိုကာ ဝမ်းအရည်များ သွားခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ဝမ်းရောဂါ စတင်ဖြစ်နေကြောင်း သတိထားရပေမည်။ ဝမ်းလျှောခြင်းနှစ်မျိုး ရှိပါသည်။ ရုတ်တရက် ဝမ်းလျှောခြင်း (Acute Diarrhoea) နှင့် နာတာရှည် ဝမ်းလျှောခြင်း (Chronic Diarrhoea) တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်သည်ဟု ယူဆရသော လူနာ၏ဝမ်းကို ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပို့ကာ ဝမ်းစစ်ဆေးခြင်း ပြုရပါသည်။ (Stoot for R.E)အဏုဇီဝမှန်ပြောင်းနှင့် ကြည့်သောအခါ အစာမကြေသော အစားအစာများ (Undigested Food Particals)များ ဘက်တီးရီးယားများကို တွေ့ရှိရသည်။ ၄င်းအပြင် E.Histo-lytica, Giardia Lumblia စသည့် ပရိုတိုဇိုးဝါးများနှင့် Ascaris Lumbrieoid, Trichuris Trichiura စသည့် သန်ကောင် အမျိုးမျိုးနှင့် Candida Albican စသည့် ပန်းကပ်မှိုများလည်း တွေ့ရှိတတ်ပါသည်။
ဘက်တီးရီးယား အများအပြား တွေ့ရှိလျှင် (Stool for culture) ခေါ် ကျောက်ကျော်ပေါ်တွင် တင်၍ ပိုးမွေးခြင်း ပြုလုပ်ရပါသည်။ ရောဂါပိုးကြောင့် ဝမ်းလျှောခြင်းဖြစ်လျှင် အောက်ပါပိုးများကို တွေ့ရှိရတတ်သည်။ အီးကိုလိုင်းပိုး၊ ဗိုင်ဗရီယိုကော်ရောဒါပိုး၊ ဆဲလ်မိုနဲလားပိုး၊ ရှီဂဲလားပိုး၊ စတက်အော်ဒီယပ်ပိုး၊ ဗက်ဆဲလပ်ပိုး စသည်တို့ကို တွေ့ရှိရတတ်ပါသည်။
အဆိပ်ရှိသောမှိုများကို စားမိလျှင်လည်း အဆိပ်သင့်ပြီး ဝမ်းလျှောတတ်ပါသည်။ အချို့ ပီလောပီနံများတွင် အဆိပ်ဓာတ် ပါဝင်တတ်သဖြင့် အခန့်မသင့်ပါက ပီလောပီနံ စားသုံးခြင်းကြောင့်လည်း ဝမ်းလျှောခြင်း ဖြစ်စေပါသည်။ အလွန်အမင်း ပူစပ်သော အစားအစာများနှင့် ပင်လယ်အစားအစာများ စားသုံးခြင်းကြောင့်၎င်း၊ ဓာတုဆေးများဖြင့် ကြာရှည်ခံအောင် ပြုလုပ်ထားသည့် အစားအစာများ စားသုံးခြင်းကြောင့်၎င်း ဤရောဂါဖြစ်နိုင်ပါသည်။
နာတာရှည် ဝမ်းရောဂါဖြစ်စေသည့် အကြောင်း---
အူလမ်းကြောင်း၌ ကင်ဆာအလုံးအကျိတ်ရှိသူများ၊ တီဘီပိုးကြောင့် ဖြစ်စေ၊ အခြားအကြောင်းကြောင့် ဖြစ်စေ အူလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းသူများ၊ အူသိမ် ဦးကျဉ်းခြင်း၊ အူသိမ်လမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ အီးဟစ်စတိုလိုက်တီကာ ပိုးရှိခြင်း၊ ဂျာရီယာလမ်ဘရီယာ ပရိုတိုဇိုဝါးရှိ်ခြင်း၊ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါရှိခြင်း၊ နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိခြင်း ဖြစ်လျှင် နာတာရှည်ဝမ်းလျှောခြင်း ဖြစ်စေပါသည်။
အထက်ပါအကြောင်းအချက်များကြောင့် ဝမ်းလျှောခြင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။ ထိုအကြောင်းအချက်များကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် အူအတွင်း၌ အရည်ပမာဏ များပြားလာပြီး အူညှစ်အား များပြားခြင်းတို့ကြောင့် ထိုရောဂါ ဖြစ်ရပါသည်။
ခန္ဓာကိုယ်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသော ကော်လော်ဒါပိုးသည် အဆိပ်ဓာတ်တမျိုးကို ထုတ်လွှတ်ပြီး ထိုအဆိပ်ဓာတ်သည် အူသိမ်နံရံကို လှုံ့ဆော်မှုပြုကာ Cyclic AMP များ အများအပြား ထွက်လာပါသည်။ ၄င်းဓာတ်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်၏ အခြားနေရာများတွင်ရှိသော အရည်များသည် အူသိမ်၊ အူမွှားများမှတဆင့် အူမကြီးဆီသို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။ အူမကြီးတွင် အရည်အမျာအပြား ရောက်ရှိလာသည့်အတွက်
စုပ်ယူနိုင်သော စွမ်းအားမှာ လုံလောက်မှုမရှိသည့်အတွက် ဝမ်းရည်အဖြစ် ဒလဟော သွားရပါသည်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများပြားလျှင်လည်း အူလမ်းကြောင်းကို လှုံ့ဆော်သည့်အတွက် အူ၏ညှစ်အား များလာပြီး ဝမ်းလျှောခြင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။
ဝမ်းလျှောခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ခန္ဓာကိုယ်၌ရှိသော ရောဓာတ်နှင့် ဓာတ်ဆားများ လျော့နည်းလာပြီး ဓာတ်ဆားများနှင့် ခန္ဓာကိုယ် ညီညွတ်မျှတခြင်းကို ထိန်းချုပ်ထားသည့် ဓာတ်များ ချို့ယွင်းကာ ရေနှင့် ဓာတ်ဆားများ နည်းပါးသွားခဲ့ရပါသည်။ ထိုသို့ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ရေနှင့်ဓာတ်ဆားများ လျော့နည်းသွားသည့် အတွက် ရေငတ်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ နုံးခြင်း၊ အသံတိမ်ဝင်သွားခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ထက် ကျော်လွန်သွားပါက အခန့်မသင့်လျှင် သွေးလန့်ခြင်း (Shock) ရကာ သတိလစ်ပြီး အသက်အန္တရာယ် ရှိစေနိုင်သည့် ရောဂါဖြစ်ပါသည်။
ဝမ်းလျှောသူအတွက် အဓိက လိုအပ်ချက်---
ဝမ်းလျှောသူများအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်မှာ ရေနှင့် ဓာတ်ဆား ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဝမ်းများများသွားခြင်းကြောင့် လူနာသည် ရေငတ်ခြင်း၊ မျက်လုံးဟောက်ပက်ဖြစ်ခြင်း၊ သွေးဖိအား ကျခြင်းတို့ ဖြစ်လျှင် ဓာတ်ဆားဖျော်ရည်ကို တိုက်ကျွေးရပေမည်။ လူနာသည် ထိုထက် အခြေအနေပိုဆိုးကာ ပျော့ခွေခြင်း၊ ခြေလက် မသယ်နိုင်အောင် ဖြစ်ခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း၊ သွေးဖိအား
အလွန်အမင်း ကျဆင်းကာ သတိလစ်လုလု အခြေအနေမျိုးရှိလျှင် နီးရာဆေးကုဌာနသို့ အမြန်ဆုံးပြသသင့်ပါသည်။ ဆေးရုံဆေးခန်းများတွင် ထိုလူနာမျိုးကို Ringers Lactate သို့မဟုတ်-Normal Saline (drip)ပုလင်းများကို သွေးပြန်ကြောမှ သွင်းကာ ကုသပေးပါသည်။ ဝမ်းလျှောရောဂါအတွက်
ရှေးဦးအသက်ကယ်ဆေးသည် ဓာတ်ဆားဖျော်ရည်နှင့် ဓာတ်ဆား Drip ပုလင်းသွင်းခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဝမ်းလျှောရောဂါသည် နို့စို့အရွယ် ကလေးငယ်များ၌ ပိုမိုဖြစ်စေပါသည်။ နို့စို့ကလေးငယ်များ ဝမ်းသွားလျှင် နို့တိုက်ခြင်းကို ရပ်ထားတတ်ပြီး ဗိုက်ထဲ၌မည်သည့်အစာမျှ မရှိလျှင် ဝမ်းပိတ်မည်ဟု အယူအဆမှားများဖြင့် ယူဆတတ်သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ကလေးငယ်များသည် တွေ့ရာပစ္စည်း
များကို ပါးစပ်ထဲသို့ ထည့်တတ်ကြသဖြင့် ရောဂါပိုးဝင်လွယ်ပါသည်။ မတ်တတ်စမ်းခါစ အရွယ်တွင်လည်း အစားစုံ စားလာသည့်အတွက် ဝမ်းလျှောစေမည့် အစားအသောက်ကြောင့် ဤရောဂါ ဖြစ်လွယ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်၍ နို့တိုက်ခြင်း ရပ်တန့်ခြင်းမှာ မှားယွင်းသော အယူအဆတရပ် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ နို့တိုက်ခြင်း ရပ်ထားသည့်အတွက် ရေနှင့် ဓာတ်ဆား မလုံလောက်ဖြစ်ကာ အရေပြားများ ရှုံ့တွပြီး စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကာ သတိလစ်ခြင်း၊ ငယ်ထိပ်ချိုင့်ခြင်း ဖြစ်လျှင် အနီးဆုံး ဆေးရုံဆေးခန်းသို့ အမြန်ဆုံး သွားပြသင့်ပါသည်။ ထိုသို့ ဝမ်းလျှောခြင်း စတင်ဖြစ်ပွားလျှင် ကလေးငယ်များအား မည်သို့ပြုစုရမည်ကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားပါသည်။
သင်၏ကလေးငယ် ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ဖြစ်လျှင် ကလေးအား အရည်ပို၍ တိုက်ကျွေးပေးရမည်။ (ဥပမာ-ထမင်းရည်၊ ဓာတ်ဆားရည်၊ ရေကောင်းရေသန့်) နို့စို့အရွယ်ဖြစ်ပါက မိခင်နို့ ဆက်တိုက်ပါ။ နို့တိုက်မရပ်ပါနဲ့။ ကလေးအား အာဟာရရရှိ်ပြီး အစာကြေလွယ်သော အစာများကျွေးပါ။ (သားငါး၊ ဆန်ပြုတ်၊ စွပ်ပြုတ်နှင့် ခြေထားသော သီးနှံများ) ဖျားနာလာလျှင် ရေအငတ်လွန်လျှင် အော့လန်လျှင် အခြေအနေ ပိုဆိုးလာလျှင် အနီးဆုံးဆေးခန်းသို့ ခေါ်သွားပါ။
လူသားအားလုံးအတွက် သတိထားဆင်ခြင်ရမည့် အကြောင်းအချက်များမှာ ဖုန်ဝင်၊ ယင်နားသော အစားအစာများ၊ လက်လုပ်ချဉ်များ၊ လက်သုပ်စုံများကို ရှောင်ရှားသင့်ပါသည်။ အစားအစာကို သေသေချာချာ ချက်ပြုတ်ပြီး ပူပူနွေးနွေး စားသုံးသင့်ပါသည်။ ချက်ပြီးသား အစားအစာများကို သေချာစွာ ဖုံးအုပ်ထားရမည်။ ချက်ပြုတ်သူသည် မိမိ၏လက်ကို စင်ကြယ်အောင် ဆေးကြောရမည်။ ကြွက်၊ ခြင်၊ ယင်၊ ပိုးဟပ်စသည့် ပိုးမွှားတိရစ္ဆာန်များကို ချက်ပြုတ်သည့် နေရာသို့ မဝင်နိုင်အောင် ကာကွယ်ထားရမည်။ သန့်ရှင်းသောရေကို သုံးရမည်။
၄င်းအပြင် အမှည့်လွန်သော အသီးအရွက်များ စားသုံးခြင်း၊ ဓာတုဗေဒ ဆိုးဆေးများနှင့် တာရှည်ခံရန် ပြုလုပ်ထားသည့် အစားအစာများ ပိုးသတ်ဆေးပါဝင်သော အစားအစာများကို စားသုံးခြင်းမှ ရှောင်ရှားသင့်ပါသည်။
အဓိကအားဖြင့် ဆိုသော် ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ရောဂါသည် အခြားရာသီဥတုများထက် မိုးရာသီတွင် အဖြစ်များ တတ်ပါသည်။ ရာသီဥတု၏ စိုစွတ်ခြင်းကြောင့် အအေးပတ်ချိန်တွင် အမှည့်လွန်သီးနှံများ စားသောက်ခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အစာခြေမှု အစီအစဉ်များ ကစဉ့်ကရဲဖြစ်ကာ ဝမ်းလျှောလွယ်ပါသည်။ ဤရောဂါအား အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ထားကာ လျစ်လျူရှုနေပါက ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ရေဓာတ်နှင့် ဓာတ်ဆားများ လျော့နည်းမှုကြောင့် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များ ချို့ယွင်းပြီး အသက်အန္တရာယ် ရှိစေနိုင်သဖြင့် ဤမိုးဥတု အခါသမယတွင် အထူးဂရုပြုကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
တေးသံရှင်ဆိုတေး အရေးပေါ်ဆောင်မှ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြော ခွဲစိတ်ကုသဆောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့
9:17:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ဦးခေါင်းပိုင်းဒဏ်ရာဖြင့် ၄၈ ရက်ကြာ တက်ရောက်ဆေးကုသလျက် ရှိသော တေးသံရှင်ဆိုတေး၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကောင်းမွန်လာသည့်အတွက် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှ စတင်ကာ အရေးပေါ် အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်မှ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောခွဲစိတ် ကုသဆောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ကုသလျက် ရှိကြောင်း အဆိုပါဆေးရုံကြီးမှ ဆေးနှင့်လူမှုဆက်ဆံရေး အရာရှိ ဦးမင်းလွင် က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
"လူနာက စကားတော့ မပြောသေးပါဘူး။ အသိတော့ ဝင်လာပါတယ်။ အဆောင်ပြောင်းတဲ့ နေ့တုန်းကဆို ဝှီးချဲ ပေါ်မှာထိုင်ပြီး ဆေးရုံကို လျှောက်ပတ်ပြတယ်။ ပြောရရင်တော့ စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေကနေ လွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့" ဟု ဦးမင်းလွင်က ထပ်မံပြောကြားသည်။
တေးသံရှင် ဆိုတေးသည် ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့်က ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၂၉၁/၃ နှင့် ၄ ကြားတွင် ယာဉ်တိမ်းမှောက် ခဲ့သောကြောင့် မန္တလေးဆေးရုံကြီးရှိ အထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင်တွင် ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိရာ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော ခွဲစိတ်ကုသဆောင်သို့ ပြောင်းလဲကုသလျက် ရှိကြောင်း ဆိုတေး၏ အဒေါ်ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ချိုချိုဝင်းက ပြောကြားသည်။
"သူ့ကို ဆေးရုံစတင်တုန်းကတော့ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြော ခွဲစိတ်ဆောင်မှာ တင်တာလေ၊ အရေးပေါ် အခြေအနေကြောင့် အထူးကြပ်မတ်ဆောင်ကို ပြောင်းလိုက်ရတာ။ အခုကျန်းမာရေးကလည်း တဖြည်းဖြည်း ကောင်းလာပါပြီ။ ဟိုတစ်နေ့က လေကောင်းလေသန့် ရအောင်လို့ ဆေးရုံထဲကို ပတ်ပြီး လိုက်ပြပေးတယ်" ဟု ၄င်းက ထပ်မံပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်မှမန္တလေး တောင်သာဘက်သို့ အသွား မိုင်တိုင် ၂၉၁/၃ မိတ္ထီလာ အမြန်လမ်းမပေါ်တွင် ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက် နေ့က အဆိုတော် ဆိုတေး၊ ဇနီး၊ ခယ်မနှင့် ယာဉ်မောင်းတို့ စီးနင်းလာသည့် မော်တော်ယာဉ်မှာ ဘီးပေါက်ကာ ယာဉ်တိမ်းမှောက်ခဲ့ပြီး ၄င်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဇနီးဖြစ်သူ မဝင့်ကုဋေသူ (ခ) ချောချောမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
8:42:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
KhinYupa ရဲ့ အလှ အပ များကို လည်း ခံစားပေးစေချင်
2:00:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
ဗြိတိသျှတို့၏ ကလေးဘဝ အကြိုက်ဆုံး ရုပ်ရှင်အဖြစ် E.T...
မိမိထက် အသက် ၇၀ ငယ်သည့် မိန်းကလေး တစ်ဦးနှင့် အသက်...
ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံး မော်ဒယ်လ် ဂီဆယ်လီ ဘန့်ချန်...
တေးသံရှင်ဆိုတေး အရေးပေါ်ဆောင်မှ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံ...